Somali - 01. Conversation - Booklet 1: Guddiga Weyn ee Ciise Masiix | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 1 Great Commission
1.01 -- Guddiga Weyn ee Ciise Masiix Iyo Jawaabta Islaamka
‘’Oo goortay arkeen isagii, way caabudeen, laakiin qaar baa shakiyey, oo Ciise ayaa u yimid oo la hadlay, oo wuxuu ku yidhi, Amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey, haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo iyaga ku qalbi qaboojiya. magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa, idinkuna had iyo goorba ha idinla jiraan kulli wixii aan idinku amrayay oo dhan, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado. Aamiin." (Matayos 28:17-20)
Ka dib markii kii iskutallaabta lagu qodbay oo la sara kiciyey wuxuu dhammeeyaa dib u heshiisiinta adduunka ee Ilaah, wuxuu rajeynaayay inuu badbaadiyo badbaadadiisa meel walba meel kasta oo uu ku maro Xertiisii. Isaga oo dembiyadii dembiyada oo dhan ku dhex jiray, kii ku guulaystay dhimashadii iyo cadaabta ayaa loogu yeeray caabudayaashiisa iyo kuwa raacsan oo wali shaki ku jira, oo waxay u oggolaadeen inay u muujiyaan badbaadadiisa dhammaan quruumaha. Xertiisii oo dhammu way carartay, saacaddana waa la jirrabay. Midkoodna midkoodna ma istaahilin inuu noqdo addoonkii Masiixa. Wicitaankiisa oo keliya ayaa iyaga u suurta geliyay inay u noqdaan Rasuullo nimcadiisa.
Masiixa ayaa shaaca ka qaaday inuu raacsan yahay in Aabihiis oo jannada ku jira uu siiyey awood dhan iyo awoodda malaa'igta iyo bini-aadanka, iskudhacyo iyo jumlado (Muujintii 5:1-14).
Sidee ayuu Ilaaha Qaadirka ahu u khatar galin karaa awooddiisa oo dhan inuu ubadkiisa? Miyuusan isaga ka cabsanayn rabshado, oo ka soo horjeedda isaga? Aabbuhu wuu ogaa Wiilkiisa. Isagu wuxuu ahaa qalbi sharaf leh, oo qalbi qallafsan. Isagu naftiisa iskama uu samatabbixin. Wuxuu naftiisa u huray denbiilayaal aan istaahilin. Wuxuu had iyo jeer u sharraxay Aabihiis sida Ruuxa Quduuska ahi mar walba ammaano Wiilka. Ilaaheenu waa Ilaah-hoosaysiiya. Sababtaas awgeed Aabbuhu awooddiisa oo dhan jannada iyo dhulka ayuu ugu wareejin karaa Wiilkiisa.
Xakameyn kala duwan oo Islaami ah. Quraanku waxa uu inoo sheegayaa inaanu jirin laba ilaahood, maxaa yeelay mid ka mid ah shaki la'aan ayaa ka kici doona kan kale (Sura al-Mu'minun 23:91). Intii lagu jiray Boqortooyadii Boqortooyada ka dib dhimashadii Suldaankii oo dhan, wiilashiisa, marka laga reebo midka ugu xoogga badan uguna adag, ayaa loo dilay si looga hortago in uu dagaal ka dhex abuurmo carshiga. Ruuxa isbahaysiga ah wuxuu ku badan yahay diinta Islaamka, maxaa yeelay mid ka mid ah 99 magacyada ugu quruxda badan ee Alle waa "kan kibirka ah, kibirka mid" (Sura al-Hashr 59:23).
Iyada oo Ciise uu yahay mid lid ku ah. Uma isticmaalin awooddiisa inuu ku dhiso boqortooyo adduunka ah oo leh canshuur iyo ciidamo. Halkii ayuu bogsiiyey dhammaan kuwii bukay oo isaga u soo booqday, wuxuu jinniyadii ka soo jiiday hantida, ayuu sara kiciyey kuwii dhintay, wuxuu cafiyay dembiyada wuxuuna ku shubay Ruuxa Quduuska ah ee ku sugnaa sugitaankiisii iyo ducada tukanayay. Waxa uu bilaabay inuu dhisto boqortooyo ruuxi ah isla markaana wuxuu awood u yeeshay awooddiisa ku saabsan cusboonaysiinta xertiisa. Magaca "Ciise" waa ujeeddadiisu: "Wuxuu dadkiisa ka badbaadin doonaa dembiyadooda." (Matayos 1:21)
1.04 -- Sidaa daraadeed u tag!
Markuu Ciise awoodda oo dhan ka helay Ilaaha Qaadirka ah wuxuu ku amray inay xertiisa u istaagaan oo ay dhaqaaqaan. Ku kalsoonaanta awooddiisa aan xadidnayn waa inay iska daayaan oo ay isku dayaan jidad cusub. Ciise wuxuu ina barayaa inaynu ku soconno oo ku degdegno! Wuxuu rabaa in aan joojino in lagu naasnuujiyo nafteena. Waxa uu doonayaa inuu naga sii daayo "I" weyn oo naga dhigo "adiga". Wuxuu noo soo diraa saaxiibbadayada. Ma doonayo inaanu u adeegno kaliya kooxdeena iyo bulshadeena, maxaa yeelay adhijirka wanaagsan wuxuu ka tagayaa 99 kii xaqa ahaa oo raadinaya idaha lumay illaa uu ka helo (Luukos 15:4-7).
Kii doonaya inuu addeeco amarka Ciise wuxuu u baahan yahay hogaan ruuxi ah. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo: "Yaan u tegi doonaa? Rabbigu wuxuu ugu jawaabay: “Weyddiista oo waa laydin siin doonaa!” (Matayos 7,7, Luukos 11,9-13, Mark 11,24). Waxaan leenahay mudnaanta in aan waydiisanno isaga oo la xariira dadka Muslimka ah ee doonaya in qalbiyadooda iyo maskaxdooda ay diyaariyaan Ruuxa Quduuska ah.
Qofkasta oo raadinaya qofkaas raadinaya waa inuusan si joogta ah uga hadlin isaga oo aan ogayn waxa uu u malaynayo iyo dareemayo, iyo sida uu u dhibsado. Xitaa markaa ma aha in aan bixinno xalal diyaarsan, laakiin Ciise waxa uu qalbigayaga weydiistaa waxa uu rabo in uu u sheego qofkan. Waxaan weydiin karnaa ereyada saxda ah waqtiga saxda ah ee qofka saxda ah; Si kastaba ha ahaatee, marka Ciise inoo sheego waxa la yiraahdo, waa in aynu u sheegno isaga oo ka baxno masuuliyadda Ciise oo ku saabsan sida eraygayaga uu noo marayo uga shaqeyn doono raadiyaha.
Is-tijaabi naftaada! Ma maqashay wicitaankaaga si aad ula hadasho deriskaaga, asxaabtaada, xaaskaaga, caruurtaada ama qof kale oo ku saabsan Ciise? Isaga baadho Ciise oo ku saabsan doonistiisa iyo amarkiisa. Ha ka xishoonin inaad addeecdaan. Haddii aad dareentid in la xakumay ama fulaynimo, markaa weydii isaga jacaylkiisa iyo xoogiisa oo aad uga gudbi karto caqabadahaas adiguba! Waxaa jira dad badan oo sugaya markhaatigaaga hoggaaminta leh ee aad adigu u malaynayso! Si kastaba ha noqotee, salaaddaada hore ayaa badanaa ka muhiimsan markhaatigaaga.
Kii doonaya inuu saaxiibbadiis la dhegaysto, waa inuu ku ducaystaa waxa ay doonayaan. Macallimiin wanaagsan ayaa ka ogyahay in ka badan ardaygiisa oo waxay samayn karaan waxa aysan awoodin inay sameeyaan, laakiin waxay doonayaan inay ogaadaan oo ay rabaan inay sameeyaan sida uu sameeyo. Uma maleynayaan inuu bilaabi karo shaqeyn adag oo erayo badan, laakiin wuxuu rabaa in uu arko in macalinkooda uu leeyahay awood iyo ruux madadaalo ah haddii uu ku noolaado sida uu dhigayo waxbarashadiisa. Markaasay dhagaysan doonaan oo way soo ururi doonaan.
Masiixiyiintu waxay wax u soo bandhigi karaan kuwa ka baxsan diintooda in aanay kuwan haysan. Masiixiyiintu waa ogyihiin in Ilaah yahay falsafadooda, Ciise Masiixi ah Badbaadiyahooda iyo Ruuxa Quduuska ah ee ay Kaaliyaha ka yihiin. Wuxuu xaq inaga naga siiyay nimcada. Wuxuu na siiyey Ruuxiisa qudhiisa sida hadiyad. Wuxuu abuuraa nabad iyo farxad weligeed ah. Waxa uu ku shubay jacaylkiisa jacaylka (Romans 5:5) wuxuuna ina siiyey macne nolosheena. Waxa uu shaaca ka qaaday runta ugu danbaysa ee uu ku socday kuwa raacsan (Yooxanaa 14:6) waxayna u siiyeen rajo mustaqbal. Wuxuu na taabtay awooddiisa weligiis ah. Waa in aynaan ilaawin isku xirnaanta aan-qabno iyo inaan si taxadar leh uga maragno waxa noo soo sara kiciyay Rabbigeenna. Waa in aan dunida siino wax ay raadineyso. Kuwa raacsan Masiixa waxay heleen nolol weligeed ah Lambarka Ilaah. La wadaag deriskaaga!
Amarkii Ciise wuxuu abuuray dhaqdhaqaaq joogta ah oo joogto ah sanadki 2000kii. Rasuulladiisii ugu horraysay ee lagu wacdiyay aagga Badda Mediterranean iyo Faaris. Dabadeed badbaadadu waxay u gudubtay Yurub iyo Bartamaha Aasiya, xitaa Shiinaha. Iyadoo helitaanka America iyo badda badda Hindiya ayaa kor u kacday Eebbe wuxuu u furay dhammaan waddamada adduunka markhaatiyadiisa. Maanta carruurtii Ibraahim, Yuhuudda iyo Muslimiintaba, waxay la kulmaan go'aanka ama ka dhanka ah Ciise. Xitaa dowladaha wada-tashiga ah, sida SRSG iyo Shiinaha oo la burburiyay, ayaa lagu dhex mari karaa injiilka. Si kastaba ha ahaatee waa in aan ogaano in ilaa hadda kaliya hal saddexaad oo ka mid ah binu'aadamku ku magacaabaa Christian. Inta badan dadkeena adduunkeena ma aqaano Badbaadiyahooda. Weli wax badan ayaa la qabanayaa! Ma fadhiisan karno oo aan nasanno. Mid ka mid ah xerta Masiixa oo dhan ayaa loogu yeeraa inuu qeyb ka noqdo qaybtiisa caalamka.
Masiixiyaddu maahan diinta kaliya ee aduunka. Quraanka ayaa labo jeer amar ku bixiyay:
"La dagaallama (hubka) illaa aan jiri doonin jiritaan diimeed (oo ka imanaya diinta Islaamka) way jiri doonaan mar dambe oo keliya diinta Alle ayaa sii ahaan doona ..." (Sura al-Anfal 8:39; al-Baqara 2:193).
In kabadan 100 aayadood ee Quraanka kicisa Muslimiinta in ay ka qaybqaataan Dagaalka Quduuska ah. Waxaad ka akhrisan kartaa: "Xaqiiqdii, Alle ayaa soo iibsaday naftii iyo hantida Mu'miniinta, si ay u helaan janno, waxay u dagaallamayaan Sababaha Alle, sidaa daraadeed waa la dilaa waana la dili doonaa." (Sura al-Tawba 9:111).
Nasiib daro, Masiixiyiintu waxay sidoo kale bilaabeen dagaalo diimeed iyo gumeysi gumeysi ah. Si kastaba ha ahaatee, falalkan danbiyadani waxay ka hor jeedaan amarkii Ciise Masiix ee u sheegay Butros: "Seeftaada geli, waayo, kii seefta qaatay seef buu ku layn doonaa." (Matayos 26:52)
Islaamku wuxuu ku faafay laba hirar oo waaweyn: weerkii ugu horreeyey wuxuu socday muddo 100 sano ah wuxuuna ku guuleystay Bariga dhow, waqooyiga Afrika, Spain, Persia iyo qaybo ka mid ah Central Asia.
Roobkii labaad ayaa la yimid Mogoliyaal iyo khalkhalkooda. Qaar badan oo ka mid ah wiilashii Genghis Khan ayaa aqbalay diinta Islaamka sida diinta diiniga ah ee ay u qabteen. Waxay hoos u dhigeen bartamaha Aasiya waxayna u yimaadeen inay ka taliyaan Shiinaha, Waqooyiga Hindiya, Mexsopotamia iyo Ruushka. Turki Ottoman, qaraabadooda, waxay qabsadeen Constantinople 1453 waxaana ku hareeraysan labo jeer oo Vienna ah. Dhibaatooyinka iyo xiisadaha ka jira Balkanka iyo Bariga Dhexe ayaa ah kuwo aan la isku haleynin oo ka yimaada burburka qashinka ah ee ka badan 400 oo sano oo xukun ah.
Duufaantii saddexaad ee ballaarinta Islaamku waxay bilowday sannadkii 1973 iyada oo kor u kacday sicirka shidaalka oo uu ka soo marayay qaaradda oo dhan. Marna ka hor inta aaney Muslimiin badani ku noolaan jirtey Dib-u-hagaajinta maanta! Immisa ayaa Masiixiyiintu rabi doonaan inay seexdaan oo ay ku riyoodaan bulsho dhaqammo badan leh?
Qaar ka mid ah muslimiinta ayaa ku adkeysanaya in diinta Islaamku tahay diidmo, diin nabadeed. Qodobada Dumar ee Qur'aanka ah ayaa ugu baaqaya wada-xaajoodka iyo tartanada shaqo wanaagsan (Sura al-Baqara 2:256; al-Ma'ida 5:47; al-Ankabut 29:46 iwm). Run ahaantii, aayadahan waxaa laga heli karaa Quraanka, laakiin waxay ka soo jeedeen wakhtiyadii Muxammad iyo kuwii raacsanaa ay weli ahaayeen dad tiro yar. Kuwani waxay ku baaqayaan dulqaadka badanaa tan iyo markaa si sharci ah loo tirtiray by amarrada kala duwan ee Allah ee Quraanka oo u yeeraya Muslimiinta dagaalka dagaalka si ay u qabtaan cadaawayaasha oo dhan (Sura al-Baqara 2:191; al-Tawba 9:4,28 iwm .). Marka laga eego Shareecada, astaamaha asalka ah ee ku saabsan dulqaadka ayaa dib loo dhigay oo aan ansax ahayn. Si kastaba ha ahaatee, aayadahan la tirtiray ayaa la isticmaalay oo muujinaya Muslimiinta ku nool xaalad tiro yar oo ka baxsan Dunida Islaamka. Muhammad ayaa sheegay dhowr jeer: Dagaalku waa khiyaamo! Himilada Islaamiga ah looma dhicin runta, laakiin khiyaamo. Alle subxaana watacaalaa dhamaantood (Sura Al Imran 3:54; al-Anfal 8:30)!
Ciise ma uusan barin fikradda aan caddayn ee Ilaah. Ma uusan sheegin wax aan la fahmi karin, waa weyn oo Alle ah! Wiilka Ilaah ayaa magiciisa Aabbaha ku muujiyay 187 jeer afartiisa Injiilkiisa wuxuuna na siiyey Ruuxiisa Quduuska ah, oo ah Ilaaha runta ah. Ciise ayaa sidoo kale qirtay: "aniga iyo Aabbuhu waa mid (aan ahayn laba)!" (Yooxanaa 10:30; 17:21-22) Waxa uu xertiisa ku amray in dhammaan dadka rumaysto farriinta injiilka, maaha magacyada seddex ilaahyo kala duwan, laakiin magaca mid ka mid ah Ilaaha, Aabbaha , Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Saddexdani waa midnimo buuxda, sida Ciise wuxuu yidhi: "Aabbuhu wuu i dhex yaal, oo waxaan ku jiraa Aabbaha." (Yooxanaa 14:10-11)
Sida laga soo xigtay mufasiriinta kala duwan ee Quraanka, Muxammad wuxuu si lama filaan ah uga hadlayaa baabtiiskii Kiristaanka wuxuuna ku magacaabay "midabkooda" (al-sibghat). Waxa uu fahmay in Masiixiyiintu ay ka duwan yihiin dadka kale ee Jasiiradda Carabta. Al-Ma'ida 5:66,82 Al-An '(Al-Ma'ida 5:66,82) Al-An' 6:90; Yunis 10:94, al-Nahl 16:34; al-Hadid 57:27; al-Saff 61:14 iwm.). Wuxuu tayadaasi u cusboonaysiiyay cusboonaysiinta ruuxa ah ee baabtiiska, saamaynta injiilka iyo axdigooda xoog leh ee Ilaah (Sura al-Ma'ida 5:110; Maryam 19:88, Al-Ahzab 33:7).
Si kastaba ha ahaatee, Muxammad wuxuu ku fashilmay dabeecad qallafsan oo ka dhan ah ilaahnimada Masiixa iyo ilaahnimada Ruuxa Quduuska ah. Qirashadiisa laba-geesoodka ah ee iimaanka diintu ka akhriso: "Ilaah kale ma jiro Eebe mooyee." Amarkii Ciise ee ku baabtiisay magaca Ilaaha Aabbaha ah, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, sidaas darteed wuxuu u muuqdaa sida cayda ah ee dhegaha Muslimiinta. Tan iyo markii Islaamku uusan jirin Ruuxa Quduuska ah sida injiilka, waxaa sidoo kale jira aqoon la'aan ah Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah ee Muslimiinta (1 Korintos 12:3; Romans 8:15-16).
Bawlos wuxuu qoray: "Nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wadaagista Ruuxa Quduuska ah ayaa kula jooga oo dhan." (2 Korintos 13:13) Baabtiisku wuxuu ina siinayaa xiriir joogto ah oo la leh Ilaah iyo amniga qoto dheer ee Quduuska Quduuska ah. Waxaan ku dhex jirnaa Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah iyada oo loo marayo baabtiiska. Ilaah waa gaashaankayaga. Kii jacaylka ku sii jiraa, Ilaah buu ka nixiyaa, Ilaahna wuu isku halleeyaa. Waa inaan ku dhejignaa hubka Ilaah oo dhan "oo" xoog leh "oo ah" Rabbiga ", ka dibna shaydaanku wax awood ah ma heli karno (1 Yooxanaa 4:16, Efesos 6:10-17 iwm).
Waxyaabaha qarsoodiga ah ee Islaamku kuma qanacsanayn fikradda la taaban karo ee Alle ee diintooda iyo xishoodka laba jeer oo qadarin ah ee diinta Islaamka (jannada ama jahannamada). Waxay isku dayaan in ay gaaraan Allah fog, xoog badan oo aan la qaadi karin iyadoo la fiirinayo. Waxay isku dayaan in ay ku galaan isaga ama ay saameyn ku yeeshaan si ay u noqdaan kuwo soo jiidatay isaga. Waxay badanaaba ku dhacaan awoodda jinni-nadiifka ah iyada oo loo marayo dhaqanno suugaan ah. Alle Islaamku waa fog yahay, waana mid aan loo dulqaadan karin, sidaa daraadeed dhammaan noocyada masawirnimada waxay si fudud u caabuqi karaan Muslimiinta. Ma jirto wax diin ah oo Islaami ah. Waxa jira wicitaan kaliya oo shuruud la'aan ah oo aan shuruud aheyn oo hoos imaanaya xukun aan haboonayn ee Alle, oo cidduu doono uu doono oo uu hanuuniyo cid kasta oo uu doono (Sura al-An'am 6:39; al-Ra'd 13:27; Ibraahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35:8; al-Muddathir 74:31). Eebana ma galo axdi la xariira Muslimiinta. Wuxuu u malaynayaa inuu addoonsado. Isagu ma aha Aabbaha, ama Badbaadiyaha, ama Ruuxa Quduuska ah. Waxa uu burburiyaa mid kasta oo aan u hoggaansamin dooniskiisa (Sura al-Ra'd 13:16; al-Zumar 39:4; al-Hujurat 49:14 iwm). Kii isha sameeya, waxaa loo gudaa sida calaamad u ah xidhiidhka uu addoonkiisa la leeyahay ee Alle. Gudniinka Islaamka waa bedelka diinta Masiixiga.
Rasuulladii Ciise Masiix waxa lagu baabtiisay Yooxanaa Baabtiisaha Webi Urdun. Waxay si qarsoodi ah u qireen dembiyadoodii iyo daruuriyadoodii si ay ugu istaagaan Ilaah hortiisa. Laakiin Ciise wuxuu ku adkaystay in la baabtiisi doono awoodda Ruuxa Quduuska ah, in aanay sii wali sii wiiqi doonin, cabsida leh oo aan awoodi karin, laakiin waxay heli lahayd hogaaminta awoodda badan ee Ilaah (Falimaha Rasuullada 1:4-8, Yooxanaa 1:33-34).
Luqadaha Semitic ee ereyga Ilaah waa "El", taas oo muujinaysa awood iyo xoog. Elohim waa qaab jamac ah waxaana lagu turjumi karaa "awoodaha Ilaah". Ereyga "Allah" ee Islaamka, si kastaba ha ahaatee, waa qaab shakhsiyeed oo macnihiisu yahay: isagu waa awood! Magaca Carabiga ah ee dareenka runta ah ma magacaabi karo Ilaaha Saddexmid. Waxay macnaheedu noqon kartaa oo keliya halbeeg.
Ciise wuxuu marag furay in dhammaan awoodda samada iyo dhulka la siiyay isaga. Waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in Ruuxa Quduusku yahay awoodda Ilaah. Ilaahayagu waa saddex-laab awood leh! Qof kasta oo magaciisa ku baabtiisay oo uu aqbalo mudnaantaas wuxuu ku xiran yahay hannaanka awoodda ee Ilaah. Wuxuu ka gudbi doonaa dhimashadiisa dembiga xagga nolosha ruuxi ah iyo kuwa kale ee ku dhintay kuwii ku dhintay dembiga iyo xumaanta si ay ugu noolaadaan injiilka. Bawlos wuxuu si cad u qiray qarsoodigan: "anigu kama xishoodo injiilka Masiixa, maxaa yeelay waa awoodda Ilaah, badbaadinta dhammaan kuwa isaga rumaysan." (Rooma 1:16)
Butros wuxuu ku boorriyay Yuhuudda naxdinta leh: "Toobad keena, mid kastaaba ha ku baabtiiso magaca Ciise Masiix dembigaaga dembiyadiinna, waxaadna heli doontaa hadiyadda Ruuxa Quduuska ah." (Falimaha Rasuullada 2:38)
Kii qof qalaad daad ku geli lahaa rumaysadkiisa ayaa xagga Ruuxa ka timaada, laakiinse kii xoog badan ayaa ku farxay isagoo wax baraya. (Ishacyaah 40:29-31)
Dalalka Carabta "ereyga Ilaah ku haynta" macneheedu waxa weeye in laga barto wadnaha. Ma ahan Muslimiin yar oo Muslimiin ah inay bartaan wadnaha, gebi ahaan ama qayb ahaan. Marmar waxay na weydiistaan sababta aan u jeclaan lahayn Ilaahay sababtoo ah ma ilaalino ereygiisa! Barashada muujinta ee wadnaha waxay u muujinaysaa caddaynta qofka jacaylka Ilaah. Muxuu Masiixiyiintu ogyahay hal aqal injiilka ama Mawduuca buurta wadnaha ah? Qaar ka mid ah dhibaatooyinka qaarkood waxay xasuusiyaan Sabuurrada 23 ama 103, xurgufka ama 1 Korintos 13. Kiristanka "wax badan ayey ka fekeraan, laakiin" waa og yihiin "wax yar! Muslimiintu inta badan way ogyihiin "wax badan ma oga" laakiin "kama fikirayaan"! Dhaqan ahaan inta badan dhaqan-dhaqameedka waa inaan toobad keenaa, mana aha oo keliya maqlitaanka ereyga Ilaah, laakiin sidoo kale wuxuu ilaalinayaa (Lukos 11:28). Kii bini-aadmiga u buuxiya calaamadaha muhiimka ah ee Kitaabka Qudduuska ah, wuxuu helayaa xoog weyn oo naftiisa ku nool.
Si kastaba ha ahaatee, ilaalinta kali ahaanteed, kuma filna. Ciise si cad ayuu u yiri: "Haddii aad i jeceshahay, amarradaydana dhawr." (Yooxanaa 14:15) Waa kuwee amarrada Masiixa? Waxa nalaku dayay inaan ka fekerno nimcada, xaqnimada, cafiska, ducada iyo Ciise qudhiisa. Dad yar oo keliya ayaa baraya sharcigiisa. Qofkii akhriya afartiisa Injiilkiisa si taxadar leh wuxuu ka heli karaa qiyaastii 500 amarrada tooska ah ama kuwa aan tooska ahayn ee Masiixa. Qaar ka mid ah waxay aqoon u yeesheen Masiixiyiinta: "Cadowgiinna jecelow, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin dhibaa, oo idin silciya. (Matayos 5:44-47) "cafi sida Ilaah u cafiyay." (Matayos 6:12,14-15) "Ha xukumina, haddaba laguma xukumi doono!" (Matayos 7:1-5)
Ku noqoshada Masiixa waa mid aan lagama maarmaan u ah qof walba. Si kastaba ha ahaatee, isbedel habka nolosheena waa mid waajib ah haddii aan rabno inaan raacno Masiixa. Ruux la'aantiis lama arki doono Rabbiga (Matayos 5:8; 1 Tesaloniika 4:3; 1 Yooxanaa 3:1-3).
Yaa ku dhici lahaa inuu qof kale baro si uu u hoggaansamo Ciise oo aan marka hore isaga raaco? U yeedhidda Ciise oo ah in uu baro oo uu xajiyo eraygiisa noloshiisa maalinlaha ah waa wacitaan macallimiinta, wacdiyeyaasha iyo rasuullada inay marka hore towbad keenaan. Rabbigu ma doonayo in uu maqlo ereyada nadiifka ah, laakiin wuxuu doonayaa in aan aragno inaan sameyno waxa aan sheegno. Haddii kale, waxaan u dhignaa erayadayada by camalkeenna!
Ciise wuxuu ku yiri: "U baro inay sameeyaan wax alla wixii aan kugu amray." Ereygan yar ee "dhammaan" waxay naga dhigaysaa inaan dareemo in la cambaareeyay. Yaa annaga oo ogyahay wax kasta oo uu Ciise na waydiistay inaan sameyno, wadnaha? Oo bal yaa had iyo goorba amar leh? Yaa baraya carruurtiisa, kooxaha dhallinyarada iyo kaniisadda? Oo kan Masiixa sharciga ku qummanuna wuxuu ku socdaa afkiisa iyo fikirkiisa. Midna kuma guulaysan doono waxyaalahan oo dhan. Dhammaanteen waan ku guuldareyaa codsiga eraygan Ciise. Xitaa kuwa ugu saamiga yar ayaa kaliya hoos u dhigi kara wejiga iyo gambarka: "Sayidow, ha i xukumeen!" In badan oo sidaas ah, haddii aan ka fikirno soo koobitaanka dhammaan amarrada Ciise oo dhan waxaan dareemeyn doonaa macnaheeda. Waxa uu yiri: "Noqoow, sidaas darteed, sida aabahaaga aadka u cakiran waa mid kaamil ah." (Maahmaahyadii 5:48) "Ma jiro mid wanaag sameeya, midna maaha." (Sabuurradii 14:2-4; Rooma 3:19-23; 7:3-8: 4 iwm)
Waxaan nahay addoonyaha Masiixa oo had iyo goor ku noolaanaya nimcada xaqnimada ah oo u baahan in la nadiifiyo maalin walba dhiigiisa. Yaa tukaday 1 Yooxanaa 1:7-2: 6 tukad ahaan waxa uu ka heli karaa sharaxaad raaxo leh amarka Rabbiga.
Ciise wuxuu rabaa inuu inaga kiciyo heerkiisa Aabihiis. Waa ujeedadiisu in ballan-qaadka aasaasiga ah ee abuuruhu uu dhammaystirnaado nolosheena: "Ilaah wuxuu abuuray muuqaalkiisa gaarka ah, sida uu Ilaahay isaga u abuuray, lab iyo dhaddig ayuu abuuray." (Bilowgii 1:27) Ciise oo keliya ayaa odhan kara: "Kii i arkay wuxuu arkay Aabbaha." (Yooxanaa 4:19) Wuxuu rabaa inuu xertiisa u beddelo muuqaalkiisa.
Sida ku qoran Axdiga Hore ee Ilaahay wuxuu ku amray: "Quduus ka dhigo inaan quduuska ahay!" (Laawiyiintii 11:44; 19:2) Isagu waa saldhigga keliya iyo ujeedada ruuxiga ah ee loogu yeedho dhammaan kuwa isaga loogu yeero.
Sida ku qoran Axdiga Cusub Ciise wuxuu amar ku bixiyay: "Jacaylka midba midka kale sidaan kuugu jeclaaday!" (Yooxanaa 13:14-15) Wuxuu jacaylkiisa u muujiyay heerkeenna. Ciise Isaga naftiisa waa sharci. Bawlos wuxuu qoray in aynnu isku dhejinno Ciise, abuurista cusub. Waa in aan si buuxda u daboolin isaga. Waxaan leenahay mudnaanta "ahaanta Masiixa". Qiyaastii 175 jeer waxaad ku heli kartaa weedho khaas ah Axdiga Cusub. Bawlos wuxuu qarsaday qarsoodi: "Haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub, waayadii hore way soo baxday, cusub ayaa yimid!" (2 Korintos 5:17-21)
Erayada Ciise: "Bar in ay ku hayaan wixii aan ku amray" waxaa laga yaabaa in lagu hagaajiyo qaar kale oo lagu akhriyo Quraanka! Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya sharciga Masiixa iyo sharciga Muxammad. Waa run in qiyaastii 500 aayadood oo Qur'aan ah ay doorteen hoggaamiyeyaasha afarta dugsi Islaami ah ee sida laf-dhabarka ee shareecada Islaamka. Laakiin kuwan waxaa ku jira aayado muujinaya in timaheenu istaagaan:
"Ha u jeesanina cadowgayga iyo cadowgaaga saaxiibtinimo oo aan u muujinno naxariis leh!" (Sura al-Mumtahana 60:1)
"Iska daaya wax kasta oo dumarka ah, laba, saddex ama afar ka mid ah, laakiin haddaad ka baqaysid inaadan caddaalad sameeyn, mid kaliya!" (Sura al-Nisa 4:3)
"Iyo kuwa aad ka cabsanaysaan in ay noqdaan kuwa caasiyiinta ah, wac iyaga, iyaga ka tago iyaga oo sariiro sariiro, oo garaacaan." (Sura al-Nisa 4:34)
"(Eebe wuxuu amar ku bixiyay Muhammad): Ka qaad ka bixitaankooda deeqaha, waxaad ku nadiifin doontaa oo iyaga daahirin doonaa." (Sura al-Ma'ida 5:6; al-Tawba 9:103; al-A'la 87:14 iwm)
"Labada rag iyo dumarba tuugoow, labada gacmood ayay u gooyeen sida ciqaabta." (Sura al-Ma'ida 5:38)
Qof kasta oo isbarbardhigaya Sharciga Masiixa iyo Sharciga Muhammad waxa uu aqoonsan yahay in ruux kale oo ku nool labadan sharci. Sharciga Muxammad ma jiro jacayl, ma jirto dib-u-heshiisiin lala yeesho Ilaah, oo aan allabari lahayn oo aan dadka kale lahayn, oo aan Ilaah quduuska ah u lahayn heer caadi ah.
Ugu danbeyntii, Muhammad qudhiisa ayaa ah kan uu sharcigu leeyahay. Noloshiisa (Sunna) waxaa loo qaaday sidii ilo labaad oo loogu talagalay dhismaha ugu dambeeya ee Sharciga Islaamka. Muslim kastaa waa inuu ku noolaadaa sida Muhammad. Haddii kale isagu maaha Muslim wanaagsan. Muxammad wuxuu qayb ka ahaa 29 weerar iyo qabqabasho wuxuuna guursaday laba iyo toban ama ka badan haween.
Ujeedada Sharciga Islaamka, Shareecada Islaamka, waa midda wanaagsan ee bulshada Islaamka (Ummadda), oo ah in la aasaaso sidii dawlad diimeed, oo ay xukumaan Islaamka. Diinta Islaamku maaha diin diimuqraadin iyo siyaasad. Waxay si buuxda u shaqayn kartaa haddii ay ku saleysan tahay sharciga Sharciga. Shariifku dhinaca kale waxaa lagu dhaqmi karaa oo keliya xukun Islaami ah. Himilada Islaamku waa mid diineed. Qaab kasta oo kale oo Islaam ah ayaa la cadeeyay inuu yahay kaliya horumarinta embriyaha.
Masiixu wuxuu ku dhawaaqay: "Boqortooyadaydu tan dunidan ma taal!" (Yooxanaa 18: 36-37) Kaniisaddiisa, oo ay la jiraan kuwa uu ugu yeedhay quruumihii, waxay ku samaystaan boqortooyadiisa ruuxiga ah ee deegaankooda. Wehelnimada xertiisu waa bilowgii boqortooyadiisa weligeed ahayd (Yooxanaa 13: 34-35). Waxaa loolan ugu jiraa inay noqdaan cusbada dhulka iyo iftiinka dunida. Sharciga Ciise ujeedadiisu ma aha in la dhiso dowlad diineed oo masiixiya ah laakiin in loo beddelo kuwa raacsan inay adeecaan amarradiisa oo ay saameyn ku yeeshaan bulshada iyo gobolka.
Haddii malaa'igta Ciise Masiix ay isku jajabiso oo aqoonsato awooddiisa iyo awooddeeda oo ay qirtaan, dabadeed Ciise wuxuu u sheegayaa: "Indhahaaga furo, eeg, waxaan ahay halkan, waxaan ku noolahay, waan jiraa, anigu keligay kaa tegin maayo! Waan ku jeclahay, waanan idin caawin doonaa, oo waxaan idinku dhaarin doonaa daacadnimadayda.
Waxaa la sheegay in Ciise mar uun muujiyay mid ka mida kuwii taabacsan riyadiisa laba jibbaar ah oo rinjiga ku jira oo qashinka lagu qeexay: "Fiiri waxaan si daacad ah uula socday waqti dheer." Marka raadsiga labaad ee riddada loo baxsado qulqulka khatarta ah, riyadii si xun u waydiiyay: "Maxaad aniga keligay uga tagtay baahida ugu weyn?" Markaasaa Sayidku wuxuu ku yidhi isagii, Waxaan idin geeyn doonaa ilaa waligeedu uu wanaagsan yahay. Jacaylka Masiixa ayaa ka weyn sidii aynu u malaynayno. Waxa uu u xaqiijiyay Rasuulkiisa: "Mana jiro cid iyaga gacantayda iga saari kara!" (Yooxanaa 10:28) Jacaylka Ciise Masiix iyo Awoodiisa waa inuu nagu dhiirrigeliyaa iimaanka iyo adeegga joogtada ah ee joogitaanka hortiisa.
Maanta kumanaan adeegayaal ajnabi ah iyo xitaa masiixiyiin qaran oo dalal badan ku shaqeeya ayaa Rabbigeenna Ciise Masiix u adeegsada daacadnimo, xitaa meelaha ay xukumaan jinniyada anti-Christian. Kaniisadaha ayaa la gubay, Masiixiyiin firfircoon ayaa la beeniyay, lagu hanjabay, iyo silcin. Qaarkood way carareen ama la jirdiley. Dad badan ayaa ku nool dhulka hoostiisa. Cabsigelinta waxay si joogta ah u dooneysaa in ay curyaan noqoto.
Laakiin Ciise wuxuu inoo xaqiijinayaa: "Maxaa kugu dhuftay, marka hore ku dhuftay!" Xanuunka dhabarka marka hore wuxuu maskaxda ku jiraa, ka hor intuusan jirka dareemin. Masiixa oo ah madaxa kaniisadda marka hore waxa uu dareemayaa silicdiisii uu ka dhexeeyay isaga, ka hor intaanay ogaan (Falimaha Rasuullada 9:4-5). Midkeenaba keligay ma aha. Wanka Ilaah wuxuu nala socdaalaa wadada dhibaatada ilaa dhamaadka. Maanta waxaa jira dhibaatooyin badan iyo sharaf badan Ciise oo aan ka ogaanno.
Marka aad baabtiisid Ciise wuxuu ku siiyey ballan qaad qabasho ah inuu kula joogo daqiiqad kasta oo noloshaada ah, inta aad la joogtaan isaga oo u adeega isaga. Xitaa khatarta ugu weyn iyo saacadda dhimashada wuxuu kugu dhowaan doonaa. Waxa uu kuu xaqiijinayaa: "Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha, Qofkii i rumeeyaa wuu noolaan doonaa, inkasta oo uu dhinto, qof kasta oo nool iyo waliba aniga weligiis ma dhiman doono, ma aaminsan tahay?" (Yooxanaa 11:25-26) Ciise wuxuu rabaa in uu ku sii wato ilaa da'da weyn oo uu kula joogo, xitaa markaad ka baxdo adduunkan (Sabuurrada 23:4-6).
In Quraanka waxaa lagu qoray in markii Muhammad lahaa in ay ka soo cararin Mecca si Madiina, wuxuu daboolka ka qaaday godka oo u sheegay Abu Bakr: "Sida run ahaantii, Eebana waa nala yahay!" Muslimiinta sii xoogaysanaya waxay dareemeen inay ka fiicnaadeen kadib (Sura al-Tawba 9:40).
Nasiib darro, Alle subxaana watacaliyay Muxammad, maaha Ilaaha runta ah, maxaa yeelay Ilaahay wuxuu leeyahay 17 jeer Quraanka inuusan lahayn wiil iyo Masiixa weligiis iskama dhinto iskutallaabta (Sura al-Nisa 4:157). Aabaha Ciise Masiix maahan Muslimiinta. Waxay diidi doonaan geerida dhimashada ee Jeuxu waxayna sheeganeysaa in ruux aan la aqoon, oo loo yaqaan Jibril (Gabriel) uu noqon lahaa Ruuxa Quduuska ah. Ruuxa Muslimiinta ku dhexjiraya nacaybka diiniga ah. Waxaan aaminsanahay in marka laga reebo Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah ma jiro Ilaah kale.
Nolosha Ciise wuxuu ku adkaynayaa xertiisa in DHAMMAAN awoodda jannada iyo dhulka la siiyo isaga. Sidaa daraadeed, waa inay tagaan kuna sameeyaan xerta DHAMMAAN quruumaha iyaga u baabtiisay magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Waa inay bartaan rumaystayaasha lagu baabtiisay inay ilaaliyaan DHAMMAAN amarradiisa oo dhan; wuxuu u yaboohay rasuulladiisa in uu la joogi doono DHAMAAN maalmaha dhammaadka da'da.
Ciise wuxuu kuugu dhiiri galinayaa inaad ku kalsoonaato afarta addoon ee uu ku nool yahay oo dhan iyo inuu fuliyo amarradiisa. Wuxuuna idin ka gargaarayaa Mu'miniinta isagoo waasac ahwayna Eebe dambi dhaafe ogaansho. Oo dabadeedna waad arki doontaa.
1.2 -- BAARIS
Haddii aad buug-yarahaan si bareer ah u barteen, waxaad si fudud u fahmi kartaa su'aalaha soo socda. Qof kasta oo ka jawaabaya boqolkiiba 90 dhammaan su'aalaha ku qoran siddeed buug oo taxanahan ah si sax ah, wuxuu ka heli karaa shahaadada xarunteena oo ah dhiirigelinta adeegyadiisa mustaqbalka ee Masiixa.
Ciise muxuu dunida ugu deeqay dhimashadiisa kadib?
Yaa istaahila inuu u adeego sidii malaa'igta Ciise Masiix?
Muxuu Ciise ugu adkaystay xitaa shakiyadii ka dhex socday isaga oo adeegsanaya gudigiisa?
Muxuu macnaheedu yahay in Ciise helay awood kasta oo samada iyo dhulka?
Muxuu aabaha jannada ku jiraa uusan ka cabsaneynin in Wiilkiisa uu ka aarsan doono isaga kadib markii uu awood u siiyey awoodiisa iyo awoodiisa?
Muxuu Ciise ku amrayaa dadka xertiisa in ay "tagaan" oo aanay ku fadhiisan?
Sidee baad u heli kartaa qof sugaya markhaatigaaga iyo sidee u la hadli kartaa isaga / iyada?
Sidee baad u soo ururin kartaa xertaada dhexdeeda? Maxaan ku siin karnaa dhegeystayaasha?
Muxuu Golaha Wakiilku u hogaaminayaa Carruurtii Ismaaciil iyo Carruurtii Yacquub? Muxuu yahay mawduucyada diimeed ama diimaha laga reebay istaraatiijiyadani?
Boqolkiiba dadka adduunka ayaa isugu yeedhaa Christian maanta? Waa maxay xaqiiqda dhabta ah ee adiga kugu ah?
Muxuu yahay macnaha baabtiiska ee magaca Faarax iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah?
Sidee ayuu midnimadu uuga muuqataa Saddexmidnimada Qudduuska ee ku jirta Guddiga Weyn?
Sidee ayaad u heli kartaa awood iyo hagid adeeggaaga Masiixa?
Muxuu yahay baabtiiska iyo dib-u-dhalashada aan dhammaad lahayn laakiin bilowga nolosha Masiixah?
Waa maxay farqiga u dhexeeya wacdinta Kuwa aan Xidhiidhka ahayn iyo barayaasha rumaystayaasha? Maxay tani macnaheedu u tahay wadahadalkaaga Muslimiinta?
Maadooyinka ay tahay inaynu barno rumaystayaasha lagu baabtiisay?
Intee inooga badan oo Masiixa ah ayaad ka heli kartaa afarta Injiil? Maxay kuwan ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee Muslimka ah?
Waa maxay farqiga u dhexeeya xaq darada rumaysadka oo keliya iyo baahida aan loo baahnayn ee camalka wanaagsan iyada oo addeecitaanka rumaysadka ah hadiyad ahaan nimco?
Muxuu yahay heerka keliya ee Sharciga ee Qiimaynta Cusub?
Sababta saddexaad ee amarka weyn ee guddiga weyni wuxuu jebiyaa kibirka macallin kasta, mucaarad iyo shaqaale haddii uu isagu daacad u yahay?
Siduu Ciise u ballanqaadi lahaa: "Bal eeg, waan kula jiraa"?
Muxuu Ciise u ballanqaadayaa inuu meel walboo meel kula joogo oo mar walba adoo adeegsanaya magaciisa?
Muxuu Muslimiintu rumaysan karaa in Masiixu (Isa) uu nool yahay Ilaahay?
Maxay suurtagal u tahay in muslimiintu u malaynayaan in laba ilaahood ay ku noolaan karaan nabadgelyo daa'im ah? Maxay tani dhibaato u tahay Masiixiyiintu in ay rumeeyaan?
Qoraan Guddiga Weyn ee Muslimiinta (oo Ingiriisi ah) si cad (iyadoo la tixraacayo Suurada iyo aayadda) oo lagu barbar dhigo Masiixiyadda Weyn ee Muhiimka ah.
Xaggee dalka iyo Muslimiinta ay ku faafeen saddexda mowqif ee saddexda mug ee ballaadhinta iyo waxa ay tahay tirada dadka adduunka maanta waa muslimiin? Immisa Muslimiin ayaa ku nool dalkaaga?
Maxay macnaheedu u tahay mujaahidiintu inay u dulqaadanayaan xubnaha diimaha kale iyo intee in le'eg dulqaadku sidan ayuu u soconayaa? Goorma ayuu bilaabaa inuu noqdo mid aan dulqaad laheeyn?
Maxaa Muxammad u diiday midnimada Axdiga Quduuska ah?
Maxuu Quraanka ka hadlayaa baabtiiska Masiixiyadda?
Maxay yihiin kala duwanaanshaha aasaasiga ah ee u dhaxeeya Sharciga Muxammad (Shariifka) iyo Sharciga Masiixa dhexdiisa Injiilka?
Maxay tahay ujeeddada Sharciga Islaamka iyo maxay ujeedada Sharciga Masiixa?
Maxay macnaheedu u tahay muslinka in Muxammad yahay habka Sharciga Islaamka?
Maxay u suurtoobi weydeen Muxammad inaanan u ballan qaadin: "Bal eeg, maalin kasta waan idinla joogayaa ilaa dhammaadka wakhtiga."
Muxuu yahay afarta "DHAMMAAN" ee Guddiga Weyn?
Qof kasta oo ka mid ah kalfadhigan ayaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta oo qormooyinkiisa ah iyo inuu weydiiyo qof kasta oo aamin ah oo loo yaqaan isaga oo ka jawaabaya su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga qoran oo ay ku jiraan cinwaankaaga oo buuxa waraaqaha ama emailkaaga. Waxaan kuu baryaynaa Ciise, oo ah Rabbiga nool, inuu soo wici doono, diro, hagto, xoojiyo, ilaaliyo oo uu kula joogo maalin kasta noloshaada!
Abd al-Masih iyo walaalihiis
Page last modified on March 24, 2020, at 12:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)